Mpihinana alika: lazainay aminao ny zavatra rehetra | Tontolo alika
Ny mpamatsy alika dia manana vovoka betsaka lavitra noho ny fahitana azy. Rehefa dinihina tokoa, dia iray amin'ireo zavatra fototra hampiasain'ny alikanao indroa na intelo isan'andro, fara fahakeliny, noho izany dia tena ilaina ny misafidy iray izay mifanaraka aminy ary mampiasa azy tsara amin'ny mora.
Izany no antony nanomananay ity lahatsoratra ity miaraka amin'ireo mpamahana alika tsara indrindra izay ho hitanao amin'ny Amazon., ankoatry ny milaza aminao ny fomba hisafidianana ilay mety indrindra amin'ny alikanao na aminao na inona na fitaovana na karazany tsara indrindra, ankoatry ny zavatra maro hafa. Ho fanampin'izay, izahay koa dia manoro hevitra an'ity lahatsoratra mifandraika ity tadiavo ireo mpamahana alika voalohany indrindra.
Nanangana feeder ho an'ny ...
1 Ny mpamahana alika tsara indrindra
1.1 Feeder anti-zavona miaraka amin'ny labyrint
1.2 Andiana feeder aluminium roa
1.3 Feeder miaraka amin'ny labyrint
1.4 Famahanana amin'ny tsihy
1.5 Sakafo mandeha ho azy ho an'ny saka sy alika
1.6 Vilia seramika ho an'ny alika
1.7 Famahanana tsy mikorisa
2 Karazana vilia alika
2.5 mandeha ho azy
3 Ny resabe amin'ny feeder nampiakatra
4 Fomba hisafidianana ny vilia
5 Aiza no hividianana feeder alika
Ny mpamahana alika tsara indrindra
Feeder anti-zavona miaraka amin'ny labyrint
Mpamatsy fialamboly ivelany ...
Raha miady saina mafy ny alikanao dia liana ianao lovia iray manohitra ny famenoana izay misoroka ny mety hisian'ny torsion amin'ny vavony (hiresaka momba azy isika avy eo). Ity maodely ity dia vita amin'ny plastika ary, ankoatry ny loko maro, dia tena mahaliana izy io satria tsy vitan'ny hoe mamela anao hisafidy ny fahaizany fotsiny ianao, fa koa maze maze samy hafa.
Amin'ny alàlan'ity famolavolana tsotra ity, ny mpamatsy sakafo dia miantoka fa tsy hihinan-kanina loatra ilay biby (Haharitra hatramin'ny folo heny intsony ny fihinanana ny sakafo). Manaiky ny hevitra fa toa miasa izy io, indrindra fa amin'ny alika lehibe, na dia misy aza ny mitaraina fa sarotra ny manadio amin'ny tanana.
Andiana feeder aluminium roa
Manolotra i Amazon Basics ity setrin'ny lovia aluminium roa mahaliana ity. Tsy vitan'ny hoe matanjaka be izy ireo, ary noho izany dia lavorary ho an'ny alika mandehandeha indrindra, fa mampiditra fantsom-bovoka koa izy ireo ka tsy afaka mihetsika mora foana. Fanampin'izay, azonao atao ny mametraka azy ao anaty vilia fanasana lovia ary tsy ho harafesina. Ny zavatra ratsy fotsiny dia ny tsy ahafahanao misafidy fahaiza-manao, ny tsirairay avy dia mahazaka sakafo 900 grama.
Feeder miaraka amin'ny labyrint
Ity feeder hafa miaraka amin'i famolavolana maze dia hamela ny alikanao hihinana haingana kokoa misaotra ny famolavolana azy, izay ao anatiny misy andiana lalantsara voafetra noho ny fiakaran'ny plastika. Ity iray ity koa dia manana loko tsara sy endrika hafa (rehefa fantatry ny alikao ny famolavolana dia azo antoka fa tsy maintsy atambatrao amin'ny iray hafa) izay, ankoatr'izay, miankina amin'ny haben'ny alika.
Manoro hevitra ny mpanamboatra fa tena zava-dehibe ny, raha manimba azy ny alika dia soloinao avy hatranysatria mety atahorana ho sempotra ianao.
Famahanana amin'ny tsihy
Ity feeder ity dia tena mahaliana ary safidy tsara tokony hodinihina raha te hanana tany madio ianaoSatria misy tsihy io dia aleonao lovia vy, satria io no fitaovana anaovana azy, ary raha tianao hanana fahaizana mampihena ny alikanao io rehefa mihinana izy, satria manana endrika anti-fogging izy io. Ho fanampin'izay, afaka misafidy ny fahaiza-manao ianao, misy amin'ny habe roa, M sy L.
Sakafo mandeha ho azy ho an'ny saka sy alika
Feeder PUPPY KITTY 7L ...
Izany no safidy lafo kokoa Anisan'ireo zavatra horesahintsika anio, saingy tena atoro ho an'ireo izay mandany fotoana kely any an-trano na te-hifehy ny lanjan'ny sakafony ohatra. Ity dispenser ity dia azo ampiasaina amin'ny alika sy saka, afaka mandefa fandaharana iray ka hatramin'ny efatra isan'andro ary manana fiasa hafa tena mahafinaritra, ohatra, azonao atao ny manoratra ny feonao hiantsoana ny biby fiompinao hihinana. Manana litatra fito litatra izy.
Vilia seramika ho an'ny alika
Izahay dia tsy te-hanadino ireo vilia seramika natao ho an'ny alika, izay an'ity maodely avy amin'ny marika Alemana Trixie ity no tena ampirisihina. Tena mety amin'ny alika alika izy ireo ary tsaboina amin'ny fonosana glossy azo antoka ary mora be ny diovina. Ity maodely ity dia manana tanjaka telo samy hafa (0,3, 0,8 ary 1,4 litatra) ary endrika sy loko maromaro hisafidianana.
Famahanana tsy mikorisa
Ary mifarana amin'ny feeder roa azo ampiharina miaraka am-tsihy isika, tonga lafatra ka tsy hamela antsika ny tany vita amin'ny amboahaolo. Ny lovia dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, tafiditra ao anaty karipetra izy ireo ary mora diovina. Azonao atao ny mametraka sakafo maina, lena, rano, ronono ... Ny feeder tsirairay dia manana 200 ml eo ho eo.
Karazana vilia alika
Betsaka, maro karazana ny mpanome alika, ary ny tsirairay dia azo alefa amin'ny alika hafa. Manaraka izany dia hiresaka aminao izahay tsy momba ireo karazany isan-karazany ihany, fa momba ny fomba fiasan'izy ireo, na tsia, miankina amin'ny karazana alika tadiavin'izy ireo.
Ny lovia plastika dia tsy isalasalana fa ny lovia alika malaza indrindra, angamba noho ny vidiny (tsy azo resahina) sy ny faharetany. Na izany aza, misy ny olana sasany, satria ny alika tia manaikitra sy mangorakoraka dia mety hanimba ilay vilia. Ny bakteria dia mety hitombo amin'ny rangotra, amin'ny farany mahatonga ny lovia ho maloto ary tsy azo antoka ho an'ny biby fiompinao.
Ankoatr'izay, maivana be, plastika plastika koa dia manahirana ny alika mihetsika besatria azon'izy ireo atao ny mandondona azy ary mampianjera ny sakafo.
Ny lovia vita amin'ny seramika, indrindra, dia safidy tsara ho an'ireo alika mihetsiketsika indrindra (Na dia tsy mandeha an-dranomasina aza ianao, satria raha tadio ny alikao dia mety hanaparitaka azy izany) satria milanja kokoa izy ireo ary kely ny vidiny hampihetsika azy ireo. Vidio izy ireo amin'ny ceramika voatsabo amin'ny sosona, satria toy izany izy io dia fitaovana goavambe izay ahafahan'ny zanatany bakteria mipetraka koa. Noho izany, raha vaky ny vilia baolina dia tsy maintsy ario eo noho eo ianao.
Lafiny iray hafa mahaliana ny seramika dia ny tsy mahatonga ny fihetsiky ny alika. izay mijaly amin'ny karazana allergy amin'ny fitaovana hafa.
Ny mpamatsy vy dia tena azo ampiharina ary safidy ankafizin'ny olona maro, satria mahatohitra mahatalanjona izy ireo, izay mety indrindra amin'ireo alika mavesatra indrindra, mavesatra indrindra, ary, ankoatr'izay, ampidirin'izy ireo amin'ny tongony fingotra ny ankamaroany mba tsy hahafahany mihetsika mora foana. Ankoatr'izay, noho ny fitaovana nanaovana azy ireo, dia mora ny manadio sy mamono otrikaretina izy ireo.
Na izany aza, mitabataba be izy ireo rehefa mihinana ny alika na mametraka sakafo azy ireo isika, Ka raha tsy tianao ny tabataba mafy dia mety tsy ity ny safidy tsara indrindra.
Raha alika be dia be ny alikao ary manana Matetika ny fanaintainan'ny vavony noho ny fihinanana sakafo haingana dia haingana, lovia tsy fogging no vahaolana. Ireo lovia ireo dia tsy zatra mihinana miadana kokoa fotsiny ilay alika, fa mampisaintsaina azy ihany koa, satria misy karazana labirinina izay tsy maintsy alain'ny alika ny sakafony.
Ireo mpaninjara sakafo alika mandeha ho azy dia tsy isalasalana fa ny tena mety indrindra ho an'ireo izay manam-potoana kely handaniana amin'ny alikany, satria tompon'andraikitra amin'ny famenoana sakafo ho azy ny vilia baolina. Mila mameno azy io amin'ny sakafo vaovao ihany ianao indraindray. Ny ankamaroany dia mamela anao hisafidy impiry sy impiry isan'andro no hampiasana azy.
Ny resabe amin'ny feeder nampiakatra
Tokoa, Anisan'ireo karazan-tsakafo vao noresahintsika izao, malahelo iray hafa ianao: mpampivelona sakafo. Tsotra ny antony tsy nampidirinay azy ireo, atahorana ho an'ireo alika ireo izay mety hijaly amin'ny fivontosan'ny vavony.
Ny torsion gastric dia aretina maranitra izay tsy maintsy tsaboina haingana araka izay tratra. Ny alika mihitsy no mahatonga azy rehefa mihinana amin'ny filan-dratsy be izy, izay mihinana sakafo sy gazy be dia be, izay mahatonga ny fidirana sy ny fivoahan'ny vavony hidina, mitarika kibo sy hatairana, izay mety hitarika ho amin'ny fahafatesana.
Na dia teo am-piandohana aza ny vilia baolina natsangana dia natolotra ho an'ireo alika mora voan'io aretina io satria heverina fa tsy dia naka rivotra firy izy ireo rehefa nihinana, fanadihadiana vao haingana no nanaporofo fa ny mifanohitra amin'izay no izy, ary ny fampiasana an'io karazan-tsakafo io dia mety hiteraka torsion amin'ny vavony (tsy tokony hohadinointsika fa ny biby dia "natao" hihinana miaraka amin'ny ny lohany amin'ny tany).
Fomba hisafidianana ny vilia
Hitanay izao ireo karazana lovia isan-karazany, hifantoka amin'izay azontsika safidiana mifanaraka amin'ny filan'ny alika isika ary mihinan-kanina tsara izy.
Tsy hanitatra intsony izahay, raha fintinina, misafidiana vilia plastika raha mila zavatra mora vidy ianao, seramika ho an'ny alika izay misy allergy na vy raha maniry zavatra mahatohitra tena ianao. Mahasoa ireo dispenser automatique raha tsy te ho mailo amin'ny famahanana ny alika na tsy ao an-trano be ianao. Mitandrema amin'ny lovia avoaka, izay mety hiteraka torsion amin'ny vavony.
Efa nolazainay izany, ny alika (sy ny biby hafa) dia zatra sy noforonin'ny natiora hisakafo miaraka amin'ny lohany amin'ny tany. Na izany aza, misy ny toe-javatra ahafahanao misafidy vilia baolina nitaiza raha manana olana amin'ny hatoka, valahany na lamosinao ny alikanao. Na izany aza tsy maintsy atao ny miresaka amin'ny mpitsabo anao aloha.
Farany, ny fahaiza-manao dia zavatra dinihina ihany koa. Mazava ho azy, raha kely ny alika misy feeder kely dia handeha izy, raha toa ka lehibe kokoa dia mila zavatra manana fahaiza-manao bebe kokoa ianao. Ampianaro ny habetsaky ny sakafo ilainao omena isaky ny mamaritra ny fahaizanao.
Aiza no hividianana feeder alika
tena afaka mahita mpihinana alika saika hatraiza hatraiza ianaoNa dia mila zavatra manokana kokoa aza ianao, dia tsy ny tranonkala rehetra no miasa ho anao. Ohatra:
Amazon Ao no ahitanao ireo feeder isan-karazany lehibe indrindra ho an'ny alika, ankoatr'izay, misy ny karazany rehetra ary mifanaraka amin'ny filàn'ny alika sy ny alikanao.
Raha ao tsena an-tserasera ny biby toa an'i TiendaAnimal na Kiwoko dia tsy ho hitanao ny karazany isan-karazany. Na izany aza, manana safidy mahaliana izy ireo, indrindra amin'ny tranonkala, na dia mila filana manokana aza ny alikanao dia tsara kokoa ny manatona fivarotana ara-batana.
Farany, sehatra lehibe rehetra manana fizarana ho an'ny biby fiompy (toa an'i Carrefour, Leroy Merlin ...) hanana vilia ho an'ny alika ianao. Na izany aza, tsy miavaka amin'ny fananana modely maro izy ireo, na dia afaka manaisotra anao maimaika aza izy ireo.
Ny mpamatsy alika dia manana poti-javatra betsaka kokoa noho ny toa azy, satria raha te hanome sakafo tsara ny alika isika dia tsy maintsy jerentsika izay ilainy. Lazao aminay, inona ny feeder ampiasain'ny alikanao? Mamporisika manokana an'izany ve ianao? Mihevitra ve ianao fa namela zavatra hojerena izahay?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Tontolo alika » Alika ankapobeny » Fitaovana alika » Mpihinana alika: lazainay anao ny zavatra rehetra